Dr. Maryan Qaasim oo is casishay - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Dr. Maryan Qaasim oo is casishay
Dr. Maryan Qaasim oo is casishay
November 15, 2017 admin2651 Comment on Dr. Maryan Qaasim oo is casishay
Wasiirka wasaaradda Gargaarka iyo maareynta musiibooyin Dr Maryan Qaasim Axmed ayaa goordhow iska casishay xilkii Wasiirnimo. Wasiirada ayaa la filayaa in goordhow la hadasho warbaahinta, iyadoo cadeyn doonta sababtii ay isku casishay.
Dr. Maryan Qaasim ayaa ka mid aheyd wasiirada aad ugu dhow Madaxweyne Farmaajo, waana wasiirkii labaad oo is casila muddo kooban, sido kale waxaa horey isku casilay Taliyihii hore Xoogga dalka Gen. Cirfiid.
Waxaa is ifbaxaya khilaaf ka dhex jira Ra’iisulwasaare Xasan Cali Kheyre iyo qaar ka mid wasiiradiisa, Kheyre ayaa lagu eedeeyaa inuu gacan togaalaysto howlaha wasaaraadaha. Wixii kusoo kordha kala soco ceelhhuur.com
Daawo Sawirada Ragii ka dambeeyey Qaraxii Zoobe
Arsenal Oo Laga Yaabo Inay Lasoo Wareegto Thomas Lemar
SAWIRO:Xarunta lagu qabanayo doorashada madaxweynaha oo qaab casriya loo diyaariyay
February 6, 2017 Duceysane
1 thought on “Dr. Maryan Qaasim oo is casishay”
Bun hadii lawayo badalkisa lahelaa wadanku waxa uu kujiraa markii loo dhabar adaygi lahaa,loona dulqadan lahaa dhibkasta,lkn xili dhaliilo yar loo cararo lama taagna.balse drso maryan qaasim wanaag aan.ku baranay.